नियम र परिभाषा - व्यापार - Libertex
नियम र परिभाषा - ट्रेडिंग
Cryptocurrencies ट्रेडिंग Libertex
घर»नियम र परिभाषा - व्यापार
नियम र परिभाषा – व्यापार
वास्तविक मूल्य कम्पनी समय को एक निश्चित बिन्दु मा एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न तयार छ, जो एक उद्धरण छ.
मूल्य सोध्न ग्राहक एक उपकरण किन्न एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न सक्छन् जो मा मूल्य छ, लागि व्यापार टर्मिनल जो स्प्रेड संग ट्रेडिंग संचालन सञ्चालन अनुमति दिनुहोस्.
अधिकृत व्यक्ति प्राकृतिक वा juridical व्यक्ति आधिकारिक व्यवस्थापन वा विशिष्ट कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार छ.
उपलब्ध धन व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल को बोनस खाता खण्ड बोनस देखि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि प्रदर्शित पैसा योगफल हो खाता व्यापारिक खाता र त्यसपछि ट्रेडिंग लेखा लागि स्थापित नियम अनुसार प्रयोग.
ब्यालेन्स ग्राहक गरेको ट्रेडिंग खाता स्थितिदेखाउनुहोस् खुला परिणाम बाहेक पैसा को एक योगफल; सबै बन्द तथा गैर-ट्रेडिंग संचालन को परिणाम विचार गर्ने ट्रेडिंग खाता को इक्विटी.
आधार मुद्रा किनेको वा भाव मुद्रा लागि बेचिएको छ जो एक मुद्रा जोडी एक मुद्रा छ (काउन्टर मुद्रा). यो एक मुद्रा जोडी मा गणक छ (जोडीलाई पहिलो मुद्रा).
बोली मूल्य जसमा ग्राहक एक बेचन कारोबार गर्न सक्छन् मूल्य छ (एक उपकरण बेच्न), ट्रेडिंग टर्मिनल जो स्प्रेड संग ट्रेडिंग संचालन सञ्चालन अनुमति दिनुहोस् लागि.
व्यापार दिन एक समय अवधि छ 06:00 गर्न 15:00 हरेक दिन GMT, सप्ताहन्तमा र बिदा बाहेक. सप्ताहन्तमा र बिदा बारे नवीनतम जानकारी कम्पनीको वेबसाइट मा प्रकाशित भएको छ. यसको लागि सारे गर्न सकिन्छ 1 जाडो र गर्मी समय पारी समयमा घण्टा.
CFD उपकरण ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन र जो जो संग एक उपकरण केही आधारभूत सम्पत्ति आधारित छ छ. एक आधारभूत सम्पत्ति साझेदारी समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, वस्तुहरु, सूचकांक, वायदा साथै अन्य वस्तुहरू, कारक र परिस्थिति कम्पनी द्वारा अनुमोदित सूची अनुसार. CFD उपकरण को संख्या बारेमा जानकारी कम्पनीको वेबसाइट मा प्रकाशित र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
कोष को शेष स्पष्ट - ग्राहक ट्रेडिंग गतिविधिमा प्रयोग गर्दैन निकासी धन को लागि उपलब्ध. कोष को शेष खाली को राशि कम्पनी द्वारा स्थापित नियम अनुसार कम्पनी द्वारा गणना छ. कोष को शेष खाली को मात्रा मा जानकारी व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल र वा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ व्यापार टर्मिनल.
ग्राहक कम्पनी सँग सम्झौता मा प्रवेश र ट्रेडिंग संचालन आयोजित सम्झौता र यसको Appendices को रूपरेखा भित्र जो प्राकृतिक वा juridical व्यक्ति छ.
ग्राहकको खाता यस ग्राहकको रकम ट्रेडिंग संचालन राखन र सञ्चालन लागि व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल मा एक विशेष खाता कम्पनी द्वारा खुलेको छ.
बन्द स्थिति एक राउन्ड ट्रिप को दोस्रो भाग को कार्यान्वयन को परिणाम हो (स्थिति बन्द को व्यापार सञ्चालन).
कम्पनीको खाता एक कम्पनी हालको खाता एक वित्तीय संस्थाले छ, खाता (वालेट) विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली साथै Paying एजेन्टहरु को खाता सहित अन्य खाता मा.
काउन्टर मुद्रा (मुद्रा उद्धरण) आधार मुद्रा खरीद र बिक्रीको लागि प्रयोग गरिन्छ जो एक मुद्रा छ. एक मुद्रा जोडी काउन्टर मुद्रा मा एक डिनोमिनेटर प्रतिनिधित्व छ (एक मुद्रा जोडी दोस्रो एक).
मुद्रा जोडी (विदेशी मुद्रा) दुई मुद्राहरू छ (आधार मुद्रा र काउन्टर मुद्रा) जो मुद्रा साधन संग एक ट्रेडिंग सञ्चालन भाग. मुद्रा जोडों को संख्या बारेमा जानकारी कम्पनीको वेबसाइट मा प्रतिनिधित्व र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
बिक्रेता एक कम्पनी कर्मचारी राज्य उद्धरण गर्ने अधिकार छ, ग्राहकहरु को ट्रेडिंग संचालन को शुद्धता निगरानी, ह्यान्डल complains र ग्राहकको खातामा मा सञ्चालन ट्रेडिंग संचालन गर्न सम्बन्धित व्यापार परिस्थिति व्याख्या.
इक्विटी अचेतन लाभ सहित ट्रेडिंग खातामा रकम को राशि गठन जो ट्रेडिंग खातामा रकम लागत एक भारित अनुमान छ (हानि).
समाप्ति CFD उपकरण को एक समाप्ति छ, हालको आधारभूत सम्पत्ति संग ट्रेडिंग संचालन को सञ्चालन रोक्न र सुरु अर्को एक साथ सञ्चालन एक ट्रेडिंग संचालन. प्रत्येक CFD साधन लागि समाप्ति मिति unilaterally कम्पनी द्वारा स्थापित हुन्छन् र कम्पनीको वेबसाइट मा निर्दिष्ट छन् र यसको व्यापार सर्भर सेट. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
बाह्य ग्राहकको खाता एक वित्तीय संस्थाले एक वर्तमान खाता छ, खाता (वालेट) विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली मा.
निश्चित मूल्य कार्यान्वयन (अनुरोध मा) ग्राहक पहिले ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन लागि सीधा उद्धरण प्रदान गर्दा ट्रेडिंग संचालन कार्यान्वयन को एक प्रकार छ र त्यसपछि उसले आफ्नो उसलाई ट्रेडिंग टर्मिनल मा मूल्य मा क्लिक गरेर एउटा ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न इच्छा पुष्टि. मूल्य मा क्लिक गरेपछि ट्रेडिंग सञ्चालन या त कम्पनी सर्भरमा पुष्टि वा ग्राहक ट्रेडिंग सञ्चालन फेरि सञ्चालन लागि उद्धरण अनुरोध गर्न प्रस्ताव गरिएको छ.
धन फिर्ता ग्राहक गरेको ट्रेडिंग खाताबाट रकम को निकासी छ र आफ्नो उसको बैंकिङ विवरण वा ग्राहकको अधिकृत व्यक्ति को बैंकिङ विवरण आफ्नो मा संकेत वा उनको निकासी अनुरोध स्थानान्तरणका.
खाली निम्न भाव धेरै द्वारा अघिल्लो एक भिन्न गर्दा मूल्य परिवर्तन छ (दसौं) पिप्स को.
रोकन सल्लाह दिछन (लक) एउटै साधन लागि दुई खुला स्थितिहरू भएको छ जहाँ एक स्थिति लामो छ र अन्य छोटो छ.
प्रारम्भिक मार्जिन (मार्जिन आवश्यकताहरु) स्थिति खोल्न आवश्यक छ कि जमानत छ. प्रत्येक साधन लागि मार्जिन आवश्यकताहरु कम्पनी वेबसाइटमा निर्दिष्ट र यसको व्यापार सर्भर सेट गरिनेछ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
तत्काल कार्यान्वयन ग्राहक ट्रेडिंग टर्मिनल मा मूल्य मा क्लिक गरेर एउटा ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न इच्छा गर्दा ट्रेडिंग संचालन कार्यान्वयन को एक प्रकार छ. मूल्य अझै वास्तविक छ भने एक ट्रेडिंग सञ्चालन पुष्टि. यदि एक उद्धरण व्यापार टर्मिनल वास्तविक कुनै पनि अधिक ग्राहक ट्रेडिंग सञ्चालन कार्यान्वयन लागि नयाँ मूल्य प्रस्ताव छैन छ. एक सीमित समय अवधिमा नयाँ मूल्य मा एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न एउटा प्रस्ताव मान्य छ. ग्राहक ग्राहकको प्रयासहरू एक ट्रेडिंग सञ्चालन बारम्बार सञ्चालन गर्न पर्छ कम्पनी सर्भरमा कुनै पनि वास्तविक मूल्य एक सम्भव ट्रेडिंग सञ्चालन कार्यान्वयन गर्न सहमत पर्छ (कुनै भन्दा कम2(दुई) एक पंक्ति मा प्रयासहरू) कारण सर्भर मा वास्तविक मूल्य परिवर्तन गर्न कम्पनीको सर्भर द्वारा अस्वीकार गर्न.
वित्तीय साधन एक स्पट साधन र (वा) CFD उपकरण. उपकरण संख्या बारेमा जानकारी कम्पनीको वेबसाइट मा प्रतिनिधित्व र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
लाभ एक ट्रेडिंग सञ्चालनको मात्रा र प्रारम्भिक मार्जिन रकम बीच अनुपात छ.
सीमा (लिन लाभ) मामला मा एक आदेश नियुक्त गरिएको छ जो एक प्रकार यस्तो आदेश मूल्य मा बेच्न सेट छ (दर) जो किन्न हालको बजार दर भन्दा उच्च वा मूल्य छ (दर) जो वर्तमान बजार दर भन्दा कम छ. सीमा आदेश को मुख्य उद्देश्य क्रम मा निर्दिष्ट एक भन्दा झन् खराब छ कि मूल्य मा एक ट्रेडिंग सञ्चालन कार्यान्वयन ग्यारेन्टी छ.
फाइल लग छ ट्रेडिंग टर्मिनल को एक भाग र (वा) व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल फिक्सिंग को लागि अभिप्रेरित (रेकर्डिङ) सम्झौताको पूरा समयमा प्रत्येक अन्य गर्न पार्टीहरू द्वारा हस्तान्तरण गर्ने ट्रेडिंग टर्मिनल मार्फत डाटा र (वा) व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल. को ट्रेडिंग टर्मिनल वा व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल गर्न सम्झौता पार्टी को हरेक पहुँच लग फाइल मा निश्चित र कम्पनी सर्भरमा नक्कल गरिनेछ. निर्दिष्ट सर्भर मुख्य जानकारी स्रोत र यो सम्झौता पूरा जोडिएको disputable परिस्थिति केलाउँदा को मामला मा प्रमाण रूपमा कम्पनीहरु द्वारा स्वीकार छन्. ग्राहक गरेको ट्रेडिंग टर्मिनल र को लग फाइल देखि जानकारी को सम्बन्ध मा सहित एक disputable अवस्था विचार गर्दा कम्पनीको सर्भर को लग फाइल देखि जानकारी अन्य तर्क भन्दा निरपेक्ष प्राथमिकता पाउनेछ (वा) व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल. कम्पनी को लागि सम्झौता पार्टी को पहुँच को तथ्यलाई समाधान गर्न अधिकार आरक्षण व्यापार टर्मिनल वा लग फाइल मा व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल.
लामो स्थिति यसको मूल्य कि आशाले एउटा साधन खरीद छ (मूल्य) उठ्नेछ.
धेरै सम्बन्ध मा एक उपकरण को मानक मात्रा जो एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन छ. एक ट्रेडिंग सञ्चालन धेरै धेरै वा तिनीहरूको भागहरु लागि सञ्चालन हुन सक्छ. प्रत्येक उपकरण र ट्रेडिंग टर्मिनल को प्रकार को लागि धेरै को आकार को कम्पनीको वेबसाइट तोकिएको र यसको व्यापार सर्भर सेट गरिनेछ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
मार्जिन स्तर (इक्विटी स्तर) इक्विटी र मार्जिन आवश्यक बीच अनुपात छ, एक प्रतिशतको रूपमा व्यक्त.
मार्जिन आवश्यक (सुरक्षित कोष, मार्जिन) एक योगफल सबै कायम गर्न एक ग्राहकको ट्रेडिंग खाता रोकिएको छ आफ्नो (उनको) स्थितिदेखाउनुहोस् खुला. प्रत्येक साधन लागि स्थितिदेखाउनुहोस् खोल्नुहोस् गर्न आवश्यक मार्जिन आवश्यकताहरु कम्पनी वेबसाइटमा निर्दिष्ट र यसको व्यापार सर्भर सेट छन्. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
बजार कार्यान्वयन (वास्तविक मूल्य) ग्राहक एक ट्रेडिंग सञ्चालन गर्ने एक ट्रेडिंग सञ्चालन अघि सहमत भएको कम्पनी सर्भरमा वास्तविक छ मूल्य मा कार्यान्वयन गरिनेछ सञ्चालन गर्न इच्छा गर्दा ट्रेडिंग संचालन कार्यान्वयन को एक प्रकार छ (नयाँ उद्धरण भेटी बिना).
मध्य मूल्य बोली बीच मूल्य छ र जो एक ग्राहक ट्रेडिंग टर्मिनल जो स्प्रेड बिना ट्रेडिंग संचालन सञ्चालन अनुमति दिनुहोस् मा सञ्चालन गर्न सक्छन् एक ट्रेडिंग सञ्चालन मूल्य सोध्नुहोस्.
गुणक Libertex टर्मिनल मा व्यापार रकम प्रतिशत परिवर्तन र आधारभूत सम्पत्ति मूल्य बीच अनुपात छ, आधार मुद्रा मूल्य प्रतिशत परिवर्तन. बारेमा प्रत्येक साधन लागि Multipliers अधिकतम आकार नवीनतम जानकारी कम्पनीको वेबसाइट मा प्रकाशित र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
गैर-ट्रेडिंग सञ्चालन छ रकम स्थानान्तरण को एक संचालन र (वा) साथै ग्राहकको ट्रेडिंग खाता सिधै ट्रेडिंग संचालन कार्यान्वयन जोडिएको अन्य संचालन देखि बन्द धन लिख.
स्थिति खुला खरिद उपकरण को राशि छ (वा बेच्न), विपरीत बिक्री द्वारा कवर छैन (खरिद) एउटै रकम नै उपकरण को र (वा) मात्रा; एउटा दुईतर्फी व्यापार को पहिलो भाग को कार्यान्वयन को परिणाम (उद्घाटन स्थितिको व्यापार संचालन). स्थिति शीर्षकमाथिको को फलस्वरूप ग्राहक एक गर्न दायित्व छ) एउटै मूल्य को स्थिति बन्द एक विपरीत ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन; ख) को मार्जिन कम्पनी द्वारा स्थापित एक भन्दा कम स्तर कायम (यो धारणा प्रयोग गरेर टर्मिनलहरु लागि).
अर्डर (रोकिएको आदेश, सीमा, स्तर) यदि अवस्था एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न एक ग्राहकको ससर्त आदेश छ, ग्राहक गरेको ट्रेडिंग टर्मिनल ग्राहक द्वारा सेट पूरा; यो यस्तो आदेश अनुसार यस Appendices द्वारा वर्णन यो सम्झौता गर्न आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया संग भविष्यमा एक नतोकिएको समयमा कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर टैग: छ. उपलब्ध आदेश प्रकारका ट्रेडिंग टर्मिनल ग्राहक रोजेका निर्भर.
बिन्दु (पिप) जो सानो महत्वपूर्ण भाव एकाइ को छ 0,0001 वा 0,01 यस उपकरण आधारमा. को लागि एक उद्धरण को एक परिवर्तन 1 (एक) जूनियर श्रेणी को एकाइ मतलब लागि परिवर्तन 1 (एक) पिप.
मूल्य फीड उद्धरण श्रृंखला पठाइएको छ व्यापार टर्मिनल ग्राहकहरु गर्न कम्पनी द्वारा प्रदान उनको अनुरोध मा सबै उद्धरण र वास्तवमा सञ्चालन ट्रेडिंग संचालन सबै मूल्यहरु सहित.
मुद्रा उद्धरण (काउन्टर मुद्रा) एक उपकरण को मूल्य नामकरण गरिएको छ जसमा एक मुद्रा छ. एक मुद्रा जोडी काउन्टर मुद्रा मा एक डिनोमिनेटर प्रतिनिधित्व छ.
उद्धरण जो मा एक उपकरण संग एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न सकिन्छ मूल्य छ.
उद्धरण मोड (कार्यान्वयन प्रकार) प्राप्त एक प्राविधिक प्रक्रिया हो (पुष्टि) हालको मूल्य र ग्राहक द्वारा एक व्यापार बनाउने. उपलब्ध भाव मोडहरू ट्रेडिंग टर्मिनल र तिनीहरूले शामिल र यो सम्झौता गर्न संवाददाता Appendices निर्दिष्ट छन् उपकरण प्रकार आधारमा फरक.
बुझे (स्थिर) वित्तीय परिणाम गोलो यात्राहरूमा एक वित्तीय परिणाम हो. गोलो यात्राहरू नकारात्मक वित्तीय परिणाम ग्राहकको हानि छ, सकारात्मक एक लाभ छ.
राउन्ड ट्रिप एउटै आवाजमा दुई विपरीत ट्रेडिंग संचालन संयोजन छ (यसको पछि बन्द एक स्थिति खोल्ने): यस पछि बिक्री खरिद वा एउटै टिकट संग स्थिति सन्दर्भमा पछि खरीद बिक्री (आईडी).
छोटो स्थिति उपकरण को बिक्री यसको मूल्य कि राखेका (मूल्य) तल जाने.
स्पट उपकरण स्पट बजार को नियम अनुसार ट्रेडिंग संचालन मा जो भाग मुद्रा जोडों र धातु हो. कम्पनी द्वारा प्रयोग स्पट उपकरण को एक सूची कम्पनीको वेबसाइट र यसको व्यापार सर्भर मा निर्दिष्ट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
फिंजाउनु को सोध्नुहोस् मूल्य र साधन को बोली मूल्य भिन्नता छ, पिप्स मा व्यक्त. फैलाउने बजार अवस्था फरक हुन सक्छ.
हानि स्टप मामला मा ग्राहकको अर्डर तोकिएको एक प्रकार यस्तो आदेश मूल्य मा बेच्न सेट गरिएको छ भने छ (दर) जो किन्न हालको बजार दर भन्दा कम वा मूल्य छ (दर) जो वर्तमान बजार दर भन्दा उच्च छ. को आदेश रोक्नुहोस् को मुख्य उद्देश्य छ पछि अर्डर मूल्य एक उपकरण मूल्य द्वारा पुग्यो हालको बजार मूल्य एक ट्रेडिंग सञ्चालन सञ्चालन गर्न छ.
बन्द-आउट जब घाटा एक स्वीकार्य स्तर पुगेको वर्तमान बजार मूल्य मा ग्राहकको स्थितिहरु को एक अनिवार्य बन्द छ. ग्राहक गरेको स्थितिहरु को अनिवार्य बन्द को नियमहरु प्रयोग ट्रेडिंग टर्मिनल आधारमा भिन्न हुन सक्छन् र ट्रेडिंग संचालन को नियम गर्न Appendices मा वर्णन गरिएको.
बन्द-आउट स्तर ओपन स्थिति मा हानि को राशि छ (स्थितिहरु) ग्राहक को ट्रिगरहरू स्थिति को अनिवार्य बन्द पुगन को मामला मा छ जो एक प्रतिशतको रूपमा व्यक्त (स्थितिहरु) ग्राहक को एक पूर्व सूचना बिना वास्तविक मूल्य मा कम्पनी द्वारा. प्रत्येक ट्रेडिंग टर्मिनल लागि बन्द-आउट स्तर कम्पनी वेबसाइटमा निर्दिष्ट र कम्पनीको सर्भर सेट छन्. कुनै पनि inconsistencies को मामला मा कम्पनीको सर्भर तोकिएको जानकारी विजयी पर्छ.
स्वाप अर्को दिन एउटा ग्राहक को खुला स्थिति को एक रोलओभर छ. आदेश र स्वाप को सर्तहरू ट्रेडिंग टर्मिनल प्रत्येक प्रकार लागि कम्पनी द्वारा स्थापित छन्.
टिक एक उपकरण को मूल्य को एक न्यूनतम परिवर्तन छ. सबै उपकरण लागि किर्नाले को विशिष्ट मान कम्पनीको वेबसाइट मा प्रकाशित र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
टिकट (आईडी) कम्पनी को ट्रेडिंग टर्मिनल मा एक ग्राहक को कुनै पनि खोलियो स्थिति वा बाँकी रहेको आदेश गर्न नियुक्त गर्न योग्य छ कि एक अद्वितीय पहिचान नम्बर छ.
व्यापार खाता ट्रयाक सबै गैर-ट्रेडिंग संचालन परिणाम राख्नको लागि यसलाई प्रयोग कम्पनी को रेकर्ड पालन गरेमा सिस्टम मा एक विशेष ग्राहकको खाता हो, व्यापार परिणाम, स्थितिदेखाउनुहोस् खुला, आदेश र अन्य कार्यहरू र यो सम्झौता र यसको Appendices द्वारा contemplated एक ग्राहक को अनुरोध.
व्यापार दिन एक समय अवधि छ 21:00:00 गर्न 20:59:59 (GMT), सप्ताहन्तमा र बिदा बाहेक. ट्रेडिंग दिन खोल्ने र बन्द समयको लागि सारे गर्न सकिन्छ 1 जाडो र गर्मी समय संक्रमण समयमा घण्टा. सप्ताहन्तमा र बिदा बारे नवीनतम जानकारी कम्पनीको वेबसाइट मा प्रतिनिधित्व र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ.
व्यापार घन्टा ट्रेडिंग संचालन कार्यान्वयन वा साधन लागि आदेश नियुक्ति सम्भव छ, जसको समयमा एक समय अवधि छ. प्रत्येक साधन लागि व्यापार अन्तराल कम्पनी वेबसाइटमा निर्दिष्ट र यसको व्यापार सर्भर मा सेट गरिएको छ. मामला मा कुनै पनि फर्क छन् व्यापार सर्भर जानकारी छाउनेछ. गैर-ट्रेडिंग घन्टा ट्रेडिंग संचालन कार्यान्वयन र आदेश नियुक्ति समयमा (संशोधनहरू) असम्भव छ.
व्यापार सञ्चालन एक सञ्चालन रूपान्तरण भन्दा-द-काउन्टर वित्तीय उपकरण संग एक ग्राहक र बीच गरिन्छ कम्पनी गैर-बितरण मोडमा, i.e. एउटा सञ्चालनको खरीद implying वा उपकरण बिक्री, त्यहाँ एक उपकरण को स्वामित्व को कुनै स्थानान्तरण छ रूपमा जहाँ सर्तहरू वा «बिक्री» प्राविधिक सर्तहरू मानिन्छ «किन्न». व्यापार संचालन कम्पनी स्थानमा सञ्चालन गर्दै.
व्यापार सञ्चालन मात्रा बेचिएको छ जो भइरहेको वा किनेको धेरै मा उपकरण को राशि छ, एक शेष को मुद्रा मा अनुरूप साधन वा व्यापार रकम को मापन को एकाइहरु (को प्रयोग ट्रेडिंग टर्मिनल आधारमा).
व्यापार टर्मिनल विशेष सफ्टवेयर र हार्डवेयर छ, जो महत्वपूर्ण सर्तहरू र स्वीकृत नियम र सर्तहरू रेकर्ड गर्न रूपमा साथै यो सम्झौता को रूपरेखा भित्र कार्यान्वयन ट्रेडिंग संचालन को अवस्था सन्दर्भमा वैश्विक कम्प्युटर नेटवर्क मार्फत कम्पनी सहमत एउटा ग्राहक सक्षम, आदेश सेट र रद्द. को ट्रेडिंग टर्मिनल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार आर्थिक जानकारी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, कम्पनी निर्देशन पठाउन र कम्पनी बाट पुष्टि र रिपोर्ट प्राप्त. को ट्रेडिंग को पार्टीहरू को पहिचान प्रदान Terminalshall (यस पार्टीहरू को प्रमाणीकरण) कि विनिमय सन्देशहरू साथै क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा को निर्मित उपकरण को मद्दतले गोपनीयता र सन्देशहरू को निष्ठा. निर्दिष्ट सफ्टवेयर र हार्डवेयर सेट सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका लागि कम्पनी द्वारा उपयोगको लागि सिफारिस गरिएको जानकारी व्यापार मंच Libertex साथै अन्य प्रणाली समावेश.
जन्माउने सम्पत्ति एक उपकरण को आधार मा छ जो र कुन किनेको वा ट्रेडिंग संचालन सञ्चालन गर्दा बेचिएको छ एउटा सम्पत्ति छ. सम्पत्ति अन्तरनिहित मुद्रा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ (आधार मुद्रा), स्टक, वस्तुहरु, सूचकांक, वायदा साथै अन्य वस्तुहरू, कारक र परिस्थिति कम्पनी द्वारा अनुमोदित सूची अनुसार.
अचेतन (अस्थायी, वर्तमान) वित्तीय परिणाम(अस्थायी लाभ / हानि) यस उपकरण को वर्तमान मूल्यहरु मा खुला स्थितिहरू लागि वित्तीय परिणाम हो. स्थितिदेखाउनुहोस् खुला लागि नकारात्मक वित्तीय परिणाम फ्लोटिंग हानि छ, सकारात्मक एक फ्लोटिंग लाभ छ.
निकासी प्रकार कोष फिर्ता प्रकार को एक उसको व्यक्तिगत खाता व्यवस्थापन पोर्टल मा एक ग्राहक गर्न प्रदान गरिएको छ.
उत्पादन विभाग को हेड संग साक्षात्कार - LIBERTEX
सुनको मूल्य जीडीपी मामलामा 1 वर्ष कम गर्न गिरावट
AlbinoMouse WordPress थीम, © प्रतिलिपि अधिकार 2018 Libertex